सुवास नेम्वाङ नै सभामुखको सम्भावनामा ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
By Digital Khabar Last updated Dec 31, 2019 14 0
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूले सभामुखको उमेदवार टुंग्याउन अझै केही दिन लाग्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुखमा पूर्वसंविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको सम्भावना बलियो छ । नेम्वाङका विषयमा दुई अध्यक्षबीच खासै विमति नरहेको सचिवालयको दाबी छ । “अहिलेको परिस्थितिमा संसद् सञ्चालन गर्न सक्ने उपयुक्त पात्र नेम्वाङ नै हो भन्ने विषयमा दुवै अध्यक्ष एक मत देखिनुभएको छ । यद्यपि निर्णय नभई यसै भन्न सकिँदैन,” सचिवालय भन्छ ।
“तर, यही कारणले दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेको भने होइन,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ, “उहाँहरूबीच कुराकानी नै राम्रोसँग हुनपाएको छैन ।”
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार बिहान सामान्य कुराकानी भए पनि विषयमै केन्द्रित रहेर छलफल हुन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।
“दुई अध्यक्षबीच कुराकानी त हुँदै आएको छ । सभामुखमै केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको छैन,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गर्‍यो ।
तर, पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र सभामुख पद आफ्नो भागको भएकाले छाड्न नहुने मत बलियो हुँदैछ । पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर सभामुख नछाड्न दबाब दिइरहेका छन् ।
यता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि सभामुखमा इच्छा देखाएकी छन् । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र महिला सांसदहरूको साथ छ । तुम्बाहाङ्फे के कति कारणले सभामुख बन्न अयोग्य भन्दै सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सभामुख बन्ने इच्छाकै कारण तुम्बाहाङ्फेले संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सञ्चालन गरिन् ।
आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा सभामुखको विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, विस्तृत कुराकानी हुन नपाएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रले अग्नि सापकोटालाई अघि सारेको छ । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पम्फा भुसाल, देव गुरुङआदिले पनि इच्छा देखाएका छन् । तर, सापकोटा नै उपयुक्त पात्र भएको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता भन्छन् ।
सभामुख मात्रैले अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएका ठाउँमा पनि तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखको हैसियतमा अध्यक्षता गरेकी छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौनदूराचार, बलात्कार प्रयास अभियोगमा पुपक्र्षका लागि जेल चलान भएपछि पद रिक्त छ ।
तुम्बाहाङ्फेले महराको गल्तीको सजायको भागिदार आफू नहुने भन्दै राजीनामा दिन आनकानी गर्दै आएकी छन् ।
संविधानमा सभामुख फरकफरक पार्टी र लिङ्गी हुनुपर्ने प्रावधानका कारण पनि उपसभामुखलाई राजीनामा नगराइ नेकपाले सभामुखमा उमेदवारी दिन पाउँदैन ।
१६ गतेको बैठकले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ
११ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भयो । सभामुखको पनि टुंगो नलागेको र कार्यसूची पनि तय नभएकाले संसद् बैठक स्थगित भयो ।
१६ गते बस्ने संसद् बैठकले सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । कार्यतालिका आएपछि सभामुखको टुङ्गो लाग्छ ।
सम्भवतः अब बस्ने पार्टी सचिवालय बैठकले सभामुखका बारेमा निर्णय लिनेछ,” प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बाह्रखरीलाई जानकारी दियो ।
राज्यमन्त्रीलाई सांसदले हानिन् थप्पड